कुमारी बैंकसँग विलय हुन लागेको देव : विकास बैंकको नाफा घट्यो
वैशाख ३०, काठमाडौं । देव : विकास बैंकको नाफा गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम भएको छ ।
कुमारी बैंकले प्राप्ति गर्न लागेको उक्त कम्पनीको नाफा गत वर्षभन्दा यस वर्ष १९ दशमलव ५० प्रतिशतले कम भएको हो । यस वर्ष कम्पनीले रू. २३ करोड ४९ लाख ८२ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको यसै अवधिसम्म रू. २९ करोड १८ लाख ८९ हजार थियो ।
यस वर्ष गत वर्षभन्दा सञ्चालन नाफा २० प्रतिशत घटेकाले नाफामा पनि कमि आएको हो । गत वर्ष रू. ४१ करोड ९२ लाख ८९ हजार सञ्चालन नाफा गरेको उक्त कम्पनीले यस वर्ष रू. ३३ करोड ५० लाख २९ हजार मात्र सञ्चालन नाफा गरेको छ ।
कम्पनीको खुद व्याज आम्दानी भने यस वर्ष १८ दशमलव २५ प्रतिशत बढी रू. ८२ करोड ३६ लाख ३१ हजार भएको छ । यस अवधिसम्म कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू. १ करोड १८ लाख १८ हजार छ ।
हाल रू. ३ अर्ब १७ करोड ७१ लाख चुक्तापूँजी रहेको उक्त कम्पनीले गत वर्षभन्दा ३१ दशमलव ९४ प्रतिशत बढी अर्थात् रू. ६४ करोड १२ लाख २३ हजार जगेडाकोष रकम कायम गरेको छ ।
निक्षेप संकलन रू. २३ अर्ब ५४ करोड ५० लाखभन्दा बढी गरेको उक्त कम्पनीले कर्जा प्रवाह रू. २१ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख ९० हजार गरेको छ ।
कम्पनीको गत वर्षभन्दा यस वर्ष निक्षेप संकलन ८ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ६ प्रतिशत बढी छ । निष्क्रिय कर्जा गत वर्षभन्दा यस वर्ष बढेको छ ।
गत वर्ष यस अवधिसम्म १ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा यस वर्ष ३ दशमलव ५७ प्रतिशत कायम छ । वार्षिक रू. ९ दशमलव ८६ प्रतिशत प्रतिशेयर आम्दानी रहेको उक्त कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १३१ दशमलव ५९ छ ।